कमजोर राजदूतको परिणाम: समाधान होइन, समस्या बताउँछन् « Media for all across the globe
कमजोर राजदूतको परिणाम: समाधान होइन, समस्या बताउँछन्
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने पिथौरागढबाट–लिपुलेक सडक भारतका रक्षामन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपनि नेपालमा तनाब सुरु भयो। कोरोना भाइरसको त्रासले बन्दाबन्दी अबस्थामा समेत काठमाडौं लगायतका ठाउँहरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारती प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिरुद्ध बिरोध प्रर्दशन भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यलाई कालापनी विवाद समाधानका लागि भारतीय पक्षसँग चाल बुझ्ने कोसिस गरे। राजदूत आचार्यले महाराष्ट्र राज्यका गर्भनर भगतसिंह कोश्यारीसँग फोन बार्ता गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको राजदूतमार्फत बार्ताका लागि सकारात्मक सन्देश आउने अपेक्षा थियो, तर ओलीले सुन्नुप¥यो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी रिसाएको खबर? राजदूत आचार्यसँगको फोनमा गर्भनर कोश्यारीले नेपालमा भइरहेको भारत र मोदी बिरोधी गतिबिधिले प्रधानमन्त्री (मोदी) रिसाएको र ओलीलाई सुनाउन आग्रह गरे। आचार्य र कोश्यारीको मित्रवत सम्बन्ध राम्रो छ। दुबै जना इपिजी समूहका सदस्य समेत हुन्। उत्तराखण्ड राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री कोश्यारी नेपालबारे राम्रो जानकार र मोदीका प्रिय पात्र पनि हुन्। कालापानी, लिपुखेक र लिपियाधुराको समाचार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरुमा प्रथामिकतामा साथ प्रकाशित भइरहेका छन्। जनस्तरको दबाबपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर कुटनीतिक नोट दिए। सरकारको यो कार्य प्रसंशनीय समेत छ।
अचम्म त यहाँ छ – प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको कुरा आफुलाई थाहा नभएको र कसैले रिर्पोटिङ पनि नगरेको बताए। प्रधानमन्त्रीको यो तर्क लाजमर्दो छ। तरपनि उनी ढुक्कसँग बोले। सरकारले भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन पूर्वमन्त्री आचार्यलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतको रुपमा दिल्ली पठाएको छ। राजदूत आचार्य भारतसँग अरुभन्दा अलिक निकट समेत मनिन्छन्। के राजदूत आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिपोटिङ गरेनन् त? दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासमा भारतलाई निगरानी गर्ने संयन्त्र साच्चिकै कमजोर हो? मानौं दिल्ली राजदूत कमजोर भयो रे – राजदूतलेसम्म केहि थाहा पाएनन् तर दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र अनुसन्धान के गरेर बसिरहेका छन्? प्रश्न गम्भीर छ?
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा राजदूत पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि राजदूत आचार्यलाई चारैतिरबाट प्रसंसा गरियो। पछिल्लो समय बढ्दै गएको नेपाल–भारत सीमा विवाद लगायत अन्य कुटनीतिक सम्बन्धहरु राम्रो बनाउने अबसरको रुपमा पनि हेरियो। भारतीय राजदूतमा आचार्य भन्दाअघि नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम सिफारिस भएपनि विवाद भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेन। यसको सिधै फाइदा आचार्यले पाए। उनले सरकारकबाट मन्त्रीसरह सुविधा समेत पाउने गरेका छन्। राजदूतमा आचार्यले अबसर त पाए तर, कार्यकालको सुरुदेखि तारिफ भने पटक्कै पाएनन्।
राजदूत आचार्य दिल्ली दूतावास पुगेपछि आलोचनाका पात्र बने। प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय उनको काम–कारबाही प्रति पूर्ण सन्तुष्ट नभएको उनी निकट स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई नाकाबन्दी ताका समर्थन गरेकै कारण पुरस्कार दिएको चर्चा राजनीतिक बृत्तमा नभएको पनि होइन। राजदूत आचार्य स्वायम् सदस्य रहेको इपिजी प्रतिवेदन समेत अलिेसम्म बेबारिसे छ।
राजदूत आचार्य प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) सदस्य हुन्। नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न गठित उक्त समितिले १९५० को सन्धि लगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका सम्पूर्ण विषय पुनरावलोकन गरी सुझाव तयार पारेको छ। प्रतिवेदन तयार भएपनि भारत सरकारले अहिलेसम्म बुझेको छैन। समूहमा नेपालबाट कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, राजदूत नीलाम्बर आचार्य र कानूनविद् सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य रहेका छन्। भारतीय पक्षबाट महाराष्ट्र राज्यका गर्भनर भगतसिंह कोश्यारी, पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती सदस्य रहेका छन्। भारतीय पक्षले नेपाल र भारतको सीमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र बनेको स्मरण गराउँदै कूटनीतिक संवादबाट समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको भने बारम्बार बताइरहेको छ।
राजदूतको रुपमा दिल्ली आएका आचार्य राजदूतहरु मध्ये कै कमजोर राजदूत भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। आचार्य नेपालको चहाना भन्दापनि भारतको आग्रहमा राजदूत बनेको चर्चा सुरुदेखि नै उठेको थियो। महाराष्ट्रका गर्भनर कोश्यारीले आचार्यलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन सक्रिय भुमिका खेलेको स्रोतले बतायो। इपिजी लगायतका महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरु ओझेलमा पार्न भारतीय पक्षले यस्तो गरेको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ। अहिले दिल्लीमा जलाई राजदूत बनाएर पठाइएको छ। त्यो नेपालले चाहेर भन्दापनि अर्कोले चाहेर आफु कहाँ मगाएको स्थिति देखिन्छ। इपिजीको सबैभन्दा कमजोर सदस्य राजदूत भएर गाँछ – राजनीतिक विश्लेषक सौरभले सन् २०१९ को अन्त्यतिर एपिवानको एक संवादमा भनेका छन्।
कुटनीतिक सम्बन्ध मात्रै होइन, कोरोना महामारीमा समेत राजदूत आचार्यको भुमिका राम्रो देखिएन। भारत लामो बन्दाबन्दीमा छ। हजारौं नेपालीहरु भारतका बिभिन्न शहरहरुमा अलपत्र छन् तर, दूतावासको समन्बय चित्तबुझ्दो देखिएन। यसै सन्दर्भमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालका बिस्वासिला पात्र तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले राजदूत आचार्यलाई ट्विटरमार्फत घुमाउरो पाराले नागरिकको पीडा नबुझ्ने राजदूत समेत बताएका छन्। राजदूत आचार्यले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत निराश बनाएका छन्। नेपाल–भारत कुटनीतिक सम्बन्ध समाधान गर्ने भन्दापनि समस्या सुनाउने गरेकोप्रति प्रधानमन्त्री लगायत नेकपा नेताहरु समेत असष्तुष्ट बनेको नेकपा स्रोतले बतायो।